दादको अनुभुत उपचार, दादलाई सानो नसम्झौं, बिग्रिएर हुनसक्छ क्यान्सर पनि
यस्तो छ दादको अनुभुत उपचार, जानी राखौ
नोभेम्बर 10, 2019 नोभेम्बर 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	उपचार, दाद
दाद (Ringworm) कुनै ब्याक्टेरियाको कारणबाट आउँदैन, यो त ढुसी (Fungus) को सङ्क्रमणबाट आउने रोग हो । छालाको दाद (Tinea Corporis) सामान्यतया Trichophyton Rubrum नामक फङ्गसको सङ्क्रमणको कारणबाट आउने गर्दछ, जुन एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ ।
नेपालमा दादको प्रकोप तीब्र रूपमा फैलिएको छ । दादको उपचारमा प्रयोग हुने अधिकांश औषधीले केही दिन काम गरेपनि पछि पुन: शुरू हुने गरेको छ । आजको लेखमा हामीले दादको सटिक उपचार गर्ने तरिकाबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछौं ।
प्रकृतिले हामीलाई अनेकौं चमत्कारिक औषधि दिएको छ तर हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौ । आज बजारमा पाइने कतिपय रसायनिक औषधीले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउदै गएको छ । सामान्य उपचार गर्दा गर्दै शरीर कमजोर बनाइदिन्छ र पछि झन्-झन् शक्तिशाली औषधीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
औषधि गर्दा गर्दा थाकी सक्नुभएको छ भने आज मैले अनौठो खालको औषधिको बारेमा पाठकलाई बताउनेछु । यस्ता औषधि प्राय: हामीले गरेका हुदैनौ या यस्ता औषधि बारे अरूलाई बताउन चाहदैनौं । यदि हामीले यस्ता औषधि प्रयोग गरेर लाभ उठाएका छौं भने अरूलाई पनि सेयर गरेर फाइदा उठाउन हामी आग्रह गर्दछौं । सक्दो सेयर गर्न आग्रह गर्दछौं ।
दादको सटिक औषधि यस्तो छ जानौं
१. दादको एरियामा दैनिक गौमूत्र दलि दिनुस क्रमश: यो रोग सदाका लागि समाप्त हुन्छ ।
२. Bacillinum २०० CH हप्तामा एक पटक र ४ हप्तासम्म सेवन गर्ने । पुन: १ महिनापछि १ पटक ४ महिनासम्म खान दिने ।
नोट : हामीले दादका हजारौं रोगी यो बिधिबाट निको बनाउन सफल भएका छौ । दाद Kaposi’s Sarcoma Cancer पनि हुन सक्छ । दादको रोगलाई सामान्य रूपमा हेर्नु हुदैन । कुनैपनि औषधि उपचारबाट ठिक नभए डाक्टरको परामर्शमा उपचार गराउनु हुन हाम्रो अनुरोध छ ।
← गाजा र भाङबाट गरिने आयुर्वेदिक उपचार
स्वास्थ्यको लागि पिप्पली खानुका फाइदाहरु →
फ्रेवुअरी 5, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4
जनवरी 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1
फ्रेवुअरी 6, 2020 साइन्स इन्फोटेक	1